A bụ otú ị n'ịwa More na-eduga na Social Media | Martech Zone
Anọ m na-ezute na onye nwe ụlọ ahịa ma na-akọwa ụzọ dị ịtụnanya nke mgbasa ozi mgbasa ozi ọ bụghị nanị na achụmnta ego na ụlọ ọrụ m, kamakwa ndị ahịa anyị. O yikarịrị ka enwere enweghị nchekwube dịka ọ na-esoro mgbasa ozi mmekọrịta yana ọ na-emetụta ya edu ọgbọ ekwere m na ọ dị mkpa idozi ya. Ọtụtụ n'ime nsogbu ndị mgbasa ozi mmekọrịta na ọgbọ ndu enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na nsonaazụ n'ezie, mana ọ ga-eme ọtụtụ na otu esi etinye ndu na isi mmalite ọ bụla - gụnyere mgbasa ozi mmekọrịta. Ndị ụlọ ọrụ anaghị atụcha nke ọma laghachi na ntinye aka nke mgbasa ozi (mgbe ụfọdụ site na enweghị mmejọ nke ha).
Otu n'ime echiche ndị na-ezighị ezi banyere ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ bụ na ha anaghị achụ ndị ọbịa mara mma. Tụnyere outbound ahịa, mmadụ mgbasa ozi nwere a 100% elu ụzọ na-nso ọnụego. Kedu ka ị si emepụta ndu site na ntanetị? Iji gosi gị usoro ịkwesịrị ịme, Neil Patel kpebiri mepụta ihe omuma nke ahụ ga-emebi usoro ahụ dum.
Neil na-akwalite a mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ atụmatụ nke na - eweputa ndu ndị ọzọ site na iji usoro kachasị mma:
Jiri ọtụtụ usoro mgbasa ozi mmekọrịta.
Zụlite atụmatụ ogologo oge maka ọwa mgbasa ozi ọ bụla.
Mee nyocha mmadu na isiokwu.
Mepụta ọdịnaya na-agbanwe agbanwe nke gosipụtara nka gị.
Soro ndị ọzọ soro na njikọta azụlite.
Cross na-akwalite ọwa gị n'etiti ndị na-ajụ ase.
Sochie nsonaazụ gị.
Na-ebuli ọdịnaya gị maka engines ọchụchọ.
Ndụmọdụ m ikpeazụ bụ ịnye netwọkụ mmekọrịta gị ụzọ nke ịtụgharị - na-enye akụrụngwa maka ndebanye aha, ndebanye aha email maka ọkwa ịkwanye, ngosipụta, nbudata na ihe ndị ọzọ bara uru nke ga-etinye na netwọkụ mmekọrịta gị na ịkwaga ha na ntụgharị mmeghari ohuru, ma obu mepee ha n’ime obodo nke na akwalite gi na netwok ha.
Tags: obodommepụta ihenyocha ndi mmadunjikọ akaọkachamarannyocha nyochaedu ọgbọneil patelụzọ ntụgharịquicksproutsearch engine njikarịchausoro mgbasa ozi mgbasa ozielekọta mmadụ mgbasa ozi na-eduga genmgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụelekọta mmadụ media na-edugausoro mgbasa ozi ọha na ezemgbasa ozi mgbasa ozi
Ihe omuma ihe di egwu. Nnukwu ọrụ.